စတင်ကျင်းပလျက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ GAC Motor Mandalay Roadshow! – AutoMyanmar
စတင်ကျင်းပလျက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ GAC Motor Mandalay Roadshow!
GAC Motor ကတော့ မန္တလေးမှာရှိနေတဲ့ ကားချစ်သူတွေအတွက် GAC Motor Mandalay Roadshow ကို ဒီနေ့ သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့မှာစတင်ပြီး ၁၂ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နံနက် ၉ နာရီကနေ ည ၉ နာရီအထိ ရတနာပုံစျေးအနီးမှာရှိနေတဲ့ Skywalk Shopping Mall မှာကျင်းပလျက်ရှိနေတာပါ။
Roadshow မှာဆိုရင်တော့ GAC Motor မှ GA4 Sedan 1.3T, GS3 SUV 1.3T, GS4 SUV 1.5T, GS5 Super SUV 1.8T, GS7 SUV 2.0T, GS8 2.0T, GM8 MPV 2.0T အစရှိတဲ့ ကားအမျိုးအစားတွေကို အထူးစျေးနှုန်းနဲ့ ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်သလို Test Drive အစီအစဉ်လည်းထည့်သွင်းပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Roadshow မှာ GAC ကားတွေကို ထုတ်လုပ်သူအာမခံ ၅ နှစ် (သို့) ကီလိုမီတာ ၁ သိန်း၊ Free Maintenance Service ၃ နှစ် (သို့) ကီလို ၆ သောင်း နဲ့ရောင်းချပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ လဲသိရပါတယ်။
ပြီးတော့ အရစ်ကျဝယ်ယူလိုသူတွေအနေနဲ့ CB bank (သို့) AYA bank တို့နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး ၃၀/၅၀ ရာခိုင်နှုန်း ကနဉီးပေးဆောင်ပြီး ၁ နှစ်ကနေ ၃ နှစ်အထိဝယ်ယူနိုင်ဉီးမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ မန္တလေးမှာ GAC Motor Showroom မရှိသေးပေမယ့် နောက်နှစ်အတွင်းလာရောက်ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့ မျှော်မှန်းထားကြောင်းကိုလည်း တာဝန်ရှိသူတစ်ဉီးကပြောကြားထားတယ်လို့ လဲသိရှိရပါတယ်။
Showroom မရှိသေးပေမယ့် တကူးတကလာရောက်ကျင်းပတဲ့ GAC Motor Mandalay Roadshow ကို မန္တလေးကားချစ်သူတွေအနေနဲ့ သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်အောင် Automyanmar မှအသိပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
GAC Motor Myanmar, local, Motor Show and Event